Archive du 16-mai-2022
Toky sy Rosamine Nifanaiky hoe “eny”
Tontosa ny sabotsy 14 may 2022 teo ny fanamasinana ny fanambadian’i Rafalimanana Tokinirina, namana mpanao gazety miandraikitra ny politika eto amin’ny gazety Tia tanindrazana, sy Rafanjanirina Todisoa Rosamine, vadiny.
Ireny sary hita namarana ny herinandro ireny fotsiny izany dia efa azo hibangoina ny lalan-kizoran’ireo mpanao politika rehetra manomboka eto hatramin’ny taona 2023.
TELEFERIKAN’ I TOULOUSE 2 TAPITRISA EUROS ISAN-TAONA NY FIKOJAKOJANA AZY
Nahazo ny teleferikany i Toulouse. 3 km no halavany. Ity no azo sokajiana ho ‘’téléférique urbain” lava indrindra ao Frantsa.
JIRAMA - Mandroseza II Nikatso ny paompy mpampiakatra rano
Nitondra fanazavana mikasika ny fikorontanan’ny famatsiana rano amina faritra maromaro eto an-drenivohitra ny orinasa JIRAMA omaly, tranga izay tena mampikolay ny mpanjifa. Nambaran’iretsy voalohany fa vokatry ny
Sakoroka tao Manakara Naratra hatramin’ny zaza menavava
Niafara tamin'ny rotaka sy poa-basy ny lalao antsoina hoe Anjara Vintana tao Bazary Tanambao ny sabotsy teo.
Tanjombato Nisy omby tafiditra tao amin’ny Jumbo Smart
Hafa kely ary tsy fahita ny zava-nitranga teny amin’ny Jumbo Smart Tanjombato ny sabotsy lasa teo. Nisy mpijery tsena sy mpiantsena niavaka, niditra ary nijerijery entana; omby iray no tafiditra tao anatin’ity trano fivarotana
Nanjavona ny raharaha Imbiki Herilaza Mbola eto sa efa nadio ny rano nitany ?
Telo volana aty aoriana, nangina tsy nisy tohiny intsony ilay raharaha nanosehana ny minisitry ny fitsarana teo aloha Atoa Imbiki Herilaza tamin’ny toerany ny 11 febroary 2022 lasa teo.
Rajoelina sy ny ekipany Mitady hanao amboletra ‘’1er tour dia vita!”
Efa tany amin’ny volana martsa tany no tsikaritra ho nanomboka nanaparitaka tsimoramora ny fehezanteny hoe « 1er tour dia vita!» ireo mpomba ny filoham-pirenena, izy ireo izay fantatra tsara fa tia mitsapatsapa sy manao serasera totoafo hanamboarana tsimoramora ny sain’ny olona.
anjombato Nisy omby tafiditra tao amin’ny Jumbo Smart
Hafa kely ary tsy fahita ny zava-nitranga teny amin’ny Jumbo Smart Tanjombato ny sabotsy lasa teo. Nisy mpijery tsena sy mpiantsena niavaka, niditra ary nijerijery entana;
Fiomanana amin’ny fifidianana Manao “Mada raid” ny AREMA
Manomboka mihetsiketsika ny etamazaoro politika volana vitsivitsy mialoha ny taom-pifidianana eto Madagasikara.
Famatsiana herinaratra Miha mafy isan’andro ny fikorontanana
Eo ihany ny fahatapahan-jiro lavareny fa eo indrindra koa amin’izao fotoana izao ny fanahian’ireo mpanjifan’ny orinasa Jiro sy rano Malagasy manoloana ny filatsahan’ny tanjaky ny jiro sy ny fitaovana mandeha amin’ny
Faritra 67 ha Mody mitrotro zaza ireo mpangaro-paosy
Tena efa mahita paikady hafa mihitsy ireo mpangarom-paosy amin’izao. Ankoatra ireo mody misisitsisika anaty taxibe dia mody mitrotro zaza indray ny sasany amin’izao mba hanakonany ny asa ratsiny.
Soavinandriana Nolavina ny hetsiky ny TIM, nekena ny an’ny TGV
Nametraka fangatahana ofisialy tao amin’ny distrikan’i Soaviandriana mba hahafahany manatanteraka fivoriana tafiditra indrindra amin’ny famelomamaso ireo rantsa mangaikany ny antono Tiako Madagasikara ny zoma lasa teo
Fanafihana mitam-piadiana Teo am-pihanihina ilay villa no voatifitra ireo jiolahy
Jiolahy telo no lavon'ny balan'ny polisy miasa ao amin'ny kaomisaria afovoany Atsimo Andrefana rehefa tratra ambodiomby nanao fanafihana mitam-piadiana.
Rallye Motul andiany fahatelo Tahina sy Ranto no nivoaka ho mpandresy
Lasan’ny Subaru Impreza STI Vidy Varotra avy amin’ny klioban’ny ASACM, nentin’I Tahina Razafinjoelina sy Ranto Ramarokoto ny laharana voalohany tamin’ny andiany fahatelo amin’ny Rallye Motul , izay nifarana nifarana omaly.
Misaona ny tontolo politika Nodimandry i Daniel Ramaromisa
Misaona ny tontolo politika Malagasy satria dia nodimandry omaly teo amin’ny faha 92 taonany ny mpanao politika, Daniel Jean Ramaromisa, fantatry ny maro tamin’ny hoe Daniel Ramaromisa.
Fanafihana mitam-piadiana Jiolahy roa lavon’ny bala tao Mahitsy
Tsy milamina mihitsy ny fandriampahalemana ao Mahitsy. Jiolahy miisa roa no lavon'ny zandary avy ao amin'ny Tobim-paritry ny Zandarimaria Mahitsy, nandritry ny fanafihana mitam-piadiana niseho tany an-toerana.
Nosy Be Niverina ny sidin’ny Ethiopian Airlines
Herintaona latsaka kely taty aorian’ny fanakatonana ny habakabak’i Nosy Be dia niverina indray ny sidina mivantana avy any ivelany iantsorohan’ny kaompania Ethiopian Airlines.
Kaominina Talatamaty Baolina kitra no nisantar ana ny fankalazana ny fetim-pirenena
Efa tafiditra tanteraka ao anatin’ny fankalazana ny fetim-pirenena 26 Jona ny kaominina Talatamaty.
Toromarika tsy voahaja Manahy rotaka ara-pifidianana ny Eoropeanina
Mitohy ary mihamafy ny fampanenoana lakolosy ataon'ny sehatra iraisam-pirenena mombana lafin-javatra maro eto amin'ny firenena.
Miaro Tanjona, zanak’I Olombelo Ricky Manaraka tsimoramora ny dian-drainy
Samy manana ny kantony. Samy manana ny feony. Samy manana ny mozikany. Mitovy fa tsy sahala, hoy ny filaza azy izay.
Bajaj very tao Mahajanga Nentinin’ilay mpamily nitsoaka tany Ambondromamy
Mirongatra ny tsy fandriampahalemana ao Mahajanga. Mitohy hatrany ny halatra bajaja izay nambaran’ireo tompony fa ireo mpamily azy ihany matetika no manao mpamosavy malemy.
Famokarana siramamy Manao andrana ny « Mini-sucrerie » ao Antanamifafy
Mitsimoka tsikelikely ireo orinasa madinika mamokatra ny zavatra ilain’ny mponina amin’ny fiainana andavanandro.
Ady amin’ny tsy fananan’asa Tanora 25 nofanina momba ny taon-trano sy ny asa vaventy
Tena mahazo vahana ny tsy fananan’asa eto amintsika. Tanora miisa 25 no nahazo fiofanana momba ny taon-trano sy ny asa vaventy ho an’ny kaominina Talatamaty.
Talata Andraikiba Tratra ireo mpivarotra fitaovam-piadiana mahery vaika
Voasambotry ny Polisy miasa ao amin'ny Fitaleavam-paritry ny Filaminam-bahoaka Vakinankaratra ny lehilahy miisa telo, 21, 23 ary 25 taona ny 13 mey lasa teo tany an-toerana noho ny fivarotana fitaovam-piadiana mahery vaika.